Home Wararka Maanta Dabageed oo muuqaalka uu Guudlaawe ka damacsan yahay B/Weyne
Dabageed oo muuqaalka uu Guudlaawe ka damacsan yahay B/Weyne
Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka HirShabeelle Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed) oo wareysi siiyey Radio Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay safarka Madaxweynaha maamulkaas Cali Guudlaawe uu maanta ku tagay magaalada Beledweyne.
Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in shaxda Madaxweynaha uu yahay in qof kasta oo reer Hiiraan ah tabashadii uu qabo uu kala fariisto oo ka xaliyo.
Sidoo kale waxa uu sheegay in hadda ka hor aysan madaxweynaha u suurta gelin inuu tago Beledweyne, balse qolo kasta oo tabasho qabta uu hadda kadib kala fariisan doono waxa ay ka tabaneyso maamulka uu hoggaamiyo.
“Qofka oo reer Hiiraan ah waan la fariisa doonaa aniga iyo madaxweynaha, waxaana diyaar u nahay inaan ka qancino tabashada ay qabaan, waxaan ka codsanayaa dadka in dowladnimada laga wada shaqeeyo,” ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka HirShabeelle.
Dabageed ayaa kii hore ee Cali Guudlaawe ee shalay, oo xilli uu ka hadlay lagu soo bandhigay ballan-qaaday in uu xalin doono hadal ka gobolka, isagoo hadalka fali doono reer HirShabelle.
“Alle ayaa mahadaas iska leh, maanta haddii aan magaalada Beledweyne aan ku suganahay, waxaa uga mahad-celinayaa halkan cidkasta oo gacan ka geysata inay sidan wanaaga ah u dhacdo oo anaga oo nabad ah oo wax dhibaato ah ku dhicin isku iman,” ayuu yiri. ugu horeyntii, isaga oo si gaar ah ugu mahad-celiyay duubabka dhaqanka, ciidanka amniga iyo madaxda HirShabeelle.
Guudlaawe ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in tabasho kasta oo jirta iyo cid kasta oo wax tabanaya uu la fariisan doono oo uu ka garaabi doono, xili ay xiisad xiisad ka taagneyd Beledweyne.